Le ndlu intle yeyona ndlela ilungileyo yokudibanisa kwiindlela zasedolophini nakwilizwe. Kuhle ukuba ngaphakathi okanye ngaphandle, le ndlu inechibi, igadi, amagumbi okulala ama-4, imigangatho emibini, i-cable tv kunye nokufikelela kwi-intanethi ngesantya esiphezulu. Iinkonzo ezongezelelweyo ziyafumaneka ngesicelo (ukupheka, ukuthenga igrosari). Amaziko okuthenga akufuphi.
Indlu enkulu yokuchitha iiholide kunye nosapho okanye nabahlobo. Iguquguquka kakhulu eqhelana nayo nayiphi na imfuno, ilungele ukuba ngaphakathi okanye ngaphandle. Amaziko okuthenga akufuphi. Indlu ingaphakathi kwikhondom evaliweyo enokhuseleko. Ixhotyiswe nge-cable tv kunye nezikrini ezisicaba kumagumbi amabini kwaye inokufikelela kwi-intanethi engenazingcingo.
Ikhondom evaliweyo ivumela nabani na ukuba athathe uhambo lwasemva kwemini ngokukhuselekileyo okanye umthambo wakusasa, ukuhamba ngaphandle kwekhondom kukwangamava amnandi ngeCuernavacas rustic style, kwaye iivenkile ezininzi zegrosari zikufuphi. Iicawe ezimbini nazo zikumgama wokuhamba. Ikwalungele abantu kuhambo oluya e-Acapulco njengendawo yokumisa phakathi kuba ikwiqhekeza lokugqibela lendlela ekhululekileyo yaseCuernavaca.
Intsebenziswano iya kuba ngomhla wokufika ngefowuni nangomhla wokuphuma. Ukutyelelwa ngamanye amaxesha komlawuli kuya kufuneka, kodwa ukujonga nje ukuba yonke into ilungile. Iinombolo zefowuni ziyafumaneka ngamaxesha onke, kunye noncedo xa ucelwa kuyo nayiphi na imeko kaxakeka.
Intsebenziswano iya kuba ngomhla wokufika ngefowuni nangomhla wokuphuma. Ukutyelelwa ngamanye amaxesha komlawuli kuya kufuneka, kodwa ukujonga nje ukuba yonke into ilungile. Iinomb…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R2255
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cuernavaca